Tsvaga Pamhepo ▷ ➡️ - Ruzivo isimba ➡️
kukunda chirwere chako
Flu uye Kutonhora
Mazita evana vacheche
Zvematongerwo enyika zveVenezuela
Argentina yakanyanya kunaka
Nyika yeSan Luis Potosi
Nhau uye Zvitendwa
Zviratidzo uye nyaya
Perks uye Njodzi
Munamato kuSan Alejo unoitwa patinenge tichida kuisa chinhambwe pakati pedu nemumwe munhu nekuti paaifanira kuita sarudzo yekufamba, akazviita asina kucheuka. Munamato unotizadza nesimba uye unotipa pfungwa yekuzvibata kubva kune avo vanhu vasingatiitiri zvakanaka kana avo... verenga zvakawanda
Munamato kuna Saint Helena kuita kuti murume ashungurudzike uye asatombomusiya kuri kure nekuve chiito cheudyire kana kushaya njere, chingave chikumbiro chekusuwa, asi chinoitwa kubva murudo uye kudiwa kwekudzorerwa. Vazhinji vanofunga kuti munamato kutambisa nguva, asi... verenga zvakawanda
Munamato wegwayana duku nyoro. Gwayana duku rakanga riri mhuka yakashandiswa naMwari kuchenesa zvivi zvenyika. Ichi ndicho chikonzero munamato wegwayana duku rakapfava chiri chiito chekutenda kunobva mumagwaro matsvene. Munamato uyu unoitwa nezvinangwa zvakawanda zvichienderana nezvinodiwa zvinenge zvichiitwa. Nekudaro, chinangwa ... verenga zvakawanda
Munamato wekutsvaga zvinhu zvakarasika wakakosha nekuti nguva zhinji tinozviwana tiri panguva yakaoma nekuda kwezvimwe zvakarasika zvakaita sekiyi dzemba kana zvimwe zvakakosha zvakaita semari. Chokwadi ndechekuti kuva nemunamato uyu kunogona kutibatsira kuti tisangowana zvatakarasa... verenga zvakawanda
Munamato kuSan Cipriano. Anozivikanwa kuva ane masimba akawanda okudenga. Kutaura munamato kuna San Cipriano wekudzivirirwa, kusunga, kudzora uye kutonga kunogona kutibatsira mumamiriro mazhinji ehupenyu. Kunyanya muzviitiko izvo zvatinofunga kuti hapana mhinduro. Nyanzvi mukugadzirisa matambudziko evaviri apo imwe ye… verenga zvakawanda
Munamato kuMwana Mutsvene weAtocha. Avo vedu vakatenda nokutendeka nekuita chiKatorike takanamata kuMwana Mutsvene waAtocha kunyange kamwechete muhupenyu hwedu, kunyanya munyika dzakaita seVenezuela, Spain, Colombia, Honduras, Philippines, United States neMexico, kwekupedzisira kuri uko. inoremekedzwa nezvimwe ... verenga zvakawanda
Munamato wekundifunga. Tinorarama nechido chokunzwa tichidiwa uye tichishuviwa, izvi zviri, kusvika pamwero wakati, zvakajairika. Kutya kurambwa kwakawedzera kuda kutowedzera uye kazhinji tinozviwana tichitsvaga munamato wekuti afunge nezvangu siku nesikati, dzoka undifonere. Izvi… verenga zvakawanda
Munamato wekuparadzanisa vanhu vaviri kuSan Alejo unoshanda nekukurumidza mumamiriro ezvinhu umo mhuri yedu, kugadzikana kwedu mupfungwa uye nemanzwiro kana kugara kwevana vedu kana mudiwa kunokanganiswa. Semuenzaniso, mune imwe nyaya umo mumwe wedu ari kutsvagwa kuti aite zviitiko zvatinoona se… verenga zvakawanda
Munyengetero wokudzikamisa uye kusimbisa munhu unokosha sezvo tisingazivi patingave tichida kukuita. Nguva zhinji tinofamba-famba kana isu tine mhuri uye tinozviwana tiri mumamiriro ezvinhu atinoda kudzikamisa munhu akagumbuka kana ari kungoda ... verenga zvakawanda
Munamato wemufi. Mariri tinokwanisa kunamatira iyo mweya iyo iri munzira yezororo rekusingaperi kuitira kuti vawane runyararo rwavanoda munguva pfupi inobvira. Chokwadi vazhinji vedu takatambura nerufu rwemunhu ari padyo nesu, zvisinei kuti yaive mhuri kana shamwari, chinhu chakakosha... verenga zvakawanda
Kunyengeterera amai vakafa kunogona kutibatsira kuwana nyaradzo yatinoda munguva yakaoma kudaro. Kufirwa naamai ndochimwe chemarwadzo akasimba kwazvo anogona kunzwiwa nemunhu wenyama nekuti anenge achirasikirwa nechaivapa hupenyu, chaivatungamirira nekuvaperekedza mukukura kwavo. Ndiyo… verenga zvakawanda
Munamato wekuti undirote. Kungaratidzika sechiito choudyire, asi chokwadi ndechokuti uyu ungava mumwe weminyengetero yemwoyo wose yatinogona kuita muupenyu hwedu. Kupinda muzviroto zvemumwe munhu inogona kuva nyaya yakaoma kana ikasaitwa nemazvo, imhaka yekuti... verenga zvakawanda
Munamato kuSan Antonio kuti uwane rudo, kutsvaga kwerudo rwechokwadi chinhu chinochengeta vanhu vazhinji vakabatikana uye kunetseka. Ichi ndicho chikonzero ivo vanowanzoona zvakakodzera kuti vanamate kuna Mutsvene Anthony kuti vawane rudo, kuti avabatsire kuzviwana. Kuita munhu... verenga zvakawanda
Namata kuna Satani. Paminamato yese iripo, tinogona kuti munamato kuna satani unoverengwa, kune vakawanda, semumwe wemimwe isinganzwisisike iripo ndosaka vanhu vachinzwa kusada kuita munamato uyu asi chokwadi ndechekuti hakuna munamato ungave wakashata. nekuti mabasa ari nyore... verenga zvakawanda
Munamato kuSan Marcos de León. Minamato yese ine simba, asi munamato kuSan Marcos de León kuti udzore, werudo, basa uye kutaurwa wakakosha sezvo San Marcos aive padyo naJesu paaiva pano pasi. Vhangeri raMusande Mako ndiro rakanyanya kukosha nekuti... verenga zvakawanda
Munamato kuna Santa Barbara. Kutambura pakati pevamwe vakadzi vepanyika, Santa Barbara akakodzera kuyemurwa sezvo akaona ruvengo rwemunhu aifanira kunge akamuda. Kusimudza munamato kuna Santa Barbara kunogona kutibatsira mune dzakawanda zviitiko uye kunyangwe mune idzo dzatakarasa tariro. Hupenyu hwake… verenga zvakawanda
Munamato kuna Santa Muerte wemari une simba chairo uye ichi ndicho chikonzero nei vanhu vazhinji vachiramba vachijoinha mutsara wevatendi uye kuti kune akawanda mashura akapihwa neMutsvene uyu. Kukumbira mari kwakajairika, izvo zvisinganyatsozivikanwa ndezvekuti... verenga zvakawanda
Munamato wekuti ubvise ziso rakaipa unoshanda pakubvisa uipi uhwu hwemweya nekuti hunoonekwa mumuviri wemunhu abatwa. Munyika yese, mutsika dzakasiyana siyana dziripo, kutenda kunochengetwa kuti kutaridzika kwegodo, pfungwa yakaipa kana chishuwo chinozvarwa kubva ... verenga zvakawanda
Munamato weRufu Rutsvene kutonga murume unoonekwa nevanhu vazhinji semunamato usinganei nechekuita nechitendero cheKatorike kana chechiKristu sezvo iri chitendero chinobva kuvagari vekuMexico. Nekudaro, kunyangwe ichokwadi chekuti chinotaridzika sechifananidzo chine dhimoni, chokwadi ndechekuti ... verenga zvakawanda
Munamato kuna San Ramón Nonato ndicho chombo chakanakisa chevakadzi vane pamuviri nekuti anozivikanwa semumwe wevatsvene vanonyanya kubatsira avo vane nhumbu. Chokwadika, unogona kumukumbira zvimwe zvinhu izvo iye, pasinei zvapo nemamiriro ezvinhu, achatireverera. Minamato ine simba nenzira huru, hatigone... verenga zvakawanda
Munyengetero wokuti tibhadharwe mari sechombo chomudzimu chatinogona kushandisa chero nguva yatinoda unokosha zvikuru sezvo rubatsiro rwomudzimu runodiwa kuti tigare tiine ukama hwakanaka neshamwari nemhuri, kunyanya kana paine nyaya dzemari. Kukweretesa munhu mari kunoda kuvimba uye kuri… verenga zvakawanda
Munamato kuna Mutsvene Charbel. Saint Charbel anonzi akakwanisa kudzoreredza tariro kuna amai vechidiki vairwara nehurwere hwakaipisisa. Nyaya inotaura kuti mukadzi uyu akange arasa kutenda kwake uye rimwe zuva mufundisi akamuraira kuti anamate kuna Saint Charbel kuti amubatsire naye… verenga zvakawanda
Kuva muduku uye kuzvitsaurira umene kubasa raShe chimwe chinhu chinokosha zvikuru, zvikurukuru munguva dzino apo chinhu chiri chose chinoratidzika kuva chakaoma zvikuru. Vechidiki vari kugara vachichinja uye zvakakosha kuziva iwo mavhesi eBhaibheri evadiki maKatorike atiinawo pese patinoada. Zvinyorwa zvesimba, zvekukurudzira, zve... verenga zvakawanda
Munamato kuna Santa Muerte kuti mudiwa adzoke. Iwe unozogona kuwana mhinduro kune zvakawanda zvezvikumbiro zvako maererano nerudo. Iye mudikani asingapedzi kupinda muhupenyu hwako kana anga asati ayambuka nzira yako anogona kugamuchira kutungamira kwaSanta Muerte kuti... verenga zvakawanda
Munamato weropa raKristu. Pakati pezvinhu zvese zvatinazvo muChechi yeKatorike, ropa raKristu nderimwe remasimba masimba uye ndosaka paine munamato kuropa raKristu. Icho chinhu icho nanhasi chichiri chipenyu nekuti chichiri mumaoko ... verenga zvakawanda
Kumunamatira kuti andifonere ndikumbire ruregerero hakusi kuita kweudyire, sezvinoonekwa nevanhu vakawanda vepamusoro. Icho, pane kudaro, chiito chekusununguka uye kuporesa kwemukati. Dzimwe nguva tine vanhu muhupenyu hwedu vanogara vachitirwadzisa asi nekuda kwechimwe chikonzero uye, zvinoshamisa sezvazvingaite senge, havaite... verenga zvakawanda
Munamato kuna Musande Ignatius weLoyola une simba guru sezvo kubvira achiri pasi pano chinhu chikuru kwaari kwaive kugara achitenda nekubatsira vamwe. Kwakanga kuri nokuda kwaikoku uko akawana zvinhu zvikuru mukuwedzera kukuva mutendi anoshingaira mushoko raMwari nomushandi wedzidziso yechiKristu. Waive… verenga zvakawanda
Munyengetero wokukurukura pasina zvinetso unogona kutibetsera nguva dzose uye nokuda kwokukurukura kwakanaka. Inogona kutibatsira munguva ino yakaoma sekuunza hupenyu munyika. Kunyangwe zvingaite senge zvisingaite uye vamwe vanhu vanoona chiitiko ichi sezvakangoita, chokwadi ndechekuti inzvimbo yakatetepa mu… verenga zvakawanda
Munamato kurufu rutsvene nekuda kwerudo rusingagone iwe uchakwanisa kurarama irwo rudo rwaunoda zvakanyanya kana kuunza iye akakosha munhu akatama nekuda kwechimwe chikonzero kana chimwe padhuze. Unogona kuvimba kuti Mutsvene uyu ane maturusi anodiwa ekukunda zvatinotora sekurasika. Anogona kupa hupenyu ku… verenga zvakawanda
Munamato wemipiro panguva yekupira pfuma yedu pamberi paIshe wakakosha zvikuru. Mipiro inogona kusiiwa paatari kana dura rechechi kana kuti tinogona kuzvipa kune mumwe munhu, asi tinofanira kugara tichiziva kuti Ishe vanokodzera chikamu chedu… verenga zvakawanda
Unoziva nhumbi dzokurwa dzaMwari here? Semuhondo, uko masoja anoda nhumbi dzekurwa dzakakosha senge mabara asingapindi bara, ngowani dzekudzivirira musoro, zvombo nezvimwe midziyo. Munyika yemweya, isu tinodawo nhumbi dzokurwa dzinotidzivirira uye dzinotibatsira kutarisana nematambudziko ese angangouya kwatiri... verenga zvakawanda
Munamato wokuvhiyiwa kana uchida kuisa mumaoko aIye Mukurusa zvinhu zvose zvinoratidzika kuva zvinodzora pfungwa. Munguva idzi kuva nokutenda kwokunamatira kunogona kuva kwakakosha, mukuwedzera kukutenda mumunyengetero kunotiunzira rugare norunyararo. Kana zvasvika kumaoperation, hapana chiri nani pane kuisa zvese... verenga zvakawanda
Munamato kuMutongi Akarurama ndomumwe unonangana kuna Ishe Jesu Kristu mutongi wedu mumwe chete pamberi paMwari Baba. Zvakakosha kuziva kuti minamato inofanira kuitwa uchitenda. Shoko raJehovha rinotidzidzisa kuti kana tikamutsvaka tinofanira kutenda kuti achateerera kutiteerera uye ichi ndicho chakavanzika chezvose izvi,... verenga zvakawanda
Munamato wekukwezva murume unogona kushorwa zvakanyanya asi unoshanda zvakanyanya uye une simba. Munamato usina kuitirwa kuti uitwe nevakadzi chete, kunyangwe vari ivo vanonyanya kushandisa chombo ichi kurwira hukama hwerudo hunoda kupindira kwamwari. Zvinofanira kucherechedzwa kuti hazvisi… verenga zvakawanda
Munamato kuna San Marcos de León, ngaauye, ngaauye, anoshanda zvakanyanya. Ngatirangarirei kuti nyika yemweya ndeyechokwadi kupfuura zvatingafungidzira uye, kuti tirwe mairi, tinoda maturusi emweya anoita kuti tiwane kukunda kana chishamiso icho chatinoda zvakanyanya. Iwo masimba akanaka anoburitswa mu... verenga zvakawanda
Minyengetero yekubhabhatidzwa kwemukomana nemusikana, mapfupi uye akanaka, iri muidi rokuti rubhabhatidzo ibasa remweya chete uye apo tinopupura kutenda kwakasimbiswa kuburikidza nemunyengetero. Zvisinei nezera remunhu kuti abhabhatidzwe, kutenda chinhu chisina... verenga zvakawanda
Munamato kuna Santa Muerte webasa une simba guru. Inoshanda kunyangwe uri kutsvaga basa kana chaunoda kugadzirisa rimwe dambudziko ririkuonekwa munzvimbo yako yebasa. Simba rakashata iro dzimwe nguva tinonzwa munzvimbo yedu yebasa rakaipa uye rinogona kukanganisa... verenga zvakawanda
Munamato kuna Saint Martin de Porres, chombo chine simba chiri mumaoko evanhu vanochengeta kutenda kune hutano uye kwakasimba. Munamato weSanta Martin de Porres unomiririra ruponeso mune dzakawanda nyaya dzekurapa dzinosanganisira vanhu vane ruvara. Paaiva mupenyu aibatsira zvikuru vaiva muchipatara... verenga zvakawanda
Munamato weIye Mukuru, mune dzimwe nguva unonziwo, munamato weMagnificat unopfuura munamato, rwiyo rwakaitwa neMhandara Maria pachake uye umo hukuru hwaMwari Wemasimbaose hunokwidziridzwa. Mhandara Maria, amai vaIshe wedu Jesu Kristu, vakapupurira simba nechishamiso… verenga zvakawanda
Munamato kuUtatu Hutsvene hweKatorike hwerudo, nyaya dzakaoma uye nekukasira uye dziviriro ndeimwe yemasimba ane simba sezvo Baba, Mwanakomana neMweya Mutsvene vakabvunzwa zvakaenzana. Shoko raMwari rinotiratidza Mwari Baba vakakomberedza zvinhu zvose, rozotizivisa kuna Jesu Kristu uyo... verenga zvakawanda
Munamato webasa tinogona kuwana zvikomborero zvakawanda. Minamato izano repamweya rinotibatsira kuwana mhinduro kumatambudziko kwatisingawanzo ziva zvekuita kana maitiro. Mumunamato uyu tinogona kuzvikumbira isu, kuitira kuti nzvimbo yebasa inakidze, tibvunze vakuru vedu kana… verenga zvakawanda
Munamato kuna Santa Muerte kuti ufunge nezvangu kupa kodzero kuna Santa uyu kuti apinde muhukama hwedu kuti atipe rubatsiro rwatinoda. Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti uyu munamato usingangoitwe chete kune vevaimbova shamwari, asi unogona kuitwa chero nguva ku ... verenga zvakawanda
Munamato kuSakaramende Yakaropafadzwa ndiyo liturgy iyo mukutenda kweKatorike inowanzoitwa nguva dzose. Vatendi vese vanofanirwa kuziva minamato iyi kuti vagone kuzviita pese patinenge tichida. Ngatiyeukei kuti minamato ishombo yatinogona kushandisa pese patinonzwa kudiwa, hatifanire kuzviita tisina kutenda asi… verenga zvakawanda
Munamato kumweya wega wekuita kuti munhu auye unogona kuve chombo chakavanzika icho chinotibatsira munguva idzo pasina mumwe munhu anogona. Panguva idzodzo dzatinoda nemweya wedu wese kuona munhu iyeye asi isu hatizive kuti toita sei kuti ndiye anosarudza... verenga zvakawanda
Munamato kuMhandara yeMontserrat yevakadzi vane pamuviri vanonamatwa neChechi yeKatorike pasirese, yaive kereke imwechete iyo munamato kuMhandara yeMontserrat yevakadzi vane pamuviri wakagadzirwa kubvira, seimwe yemifananidzo yeMhandara Maria, anoziva. zvakanaka kuti chii chiri kuita hupenyu mukati mechibereko… verenga zvakawanda
Munamato kuna Saint Catherine weSiena uine zvakawanda zvinangwa. Anozivikanwa semumwe wavanachiremba vechitendero cheCatholic, saka ane simba rekutibatsira pazvinhu zvine chekuita nehutano uye kugara zvakanaka mumuviri, mupfungwa uye pamweya. Aive munyori uye muparidzi weshoko raMwari mu… verenga zvakawanda
Munamato webusiness the spiritual world is a reality which we cannot escape from or ignore, so kana tatanga a new venture zvakanaka kuti tinamatire business ratiri kutanga. Kuti ive bhizinesi rakaropafadzwa, kuitira kuti simba rakanaka riyerere nguva dzese. Tinogona kubvunza... verenga zvakawanda
Munamato kuSan Roque chombo chine simba kwatiri tese tinoda kupindira kwaMwari mune mamwe mamiriro ezvinhu anogona kubuda muhupenyu, zvakananga kana zvisina kunanga. Simba reminamato hariverengeki, naro tinogona kuwana kukunda kwaisazogoneka kukunda. Iyo chete… verenga zvakawanda
Munamato wechikomborero unofanira kugara uri mumuromo medu sezvo nawo tichigona kuisa ruzhowa rwakatikomberedza uko zvinhu zvakanaka ndizvo zvinopinda. Izwi raMwari rinotitsanangurira kuti maropafadzo aMwari haawedzeri kusuwa uye ichi ndicho kiyi yekukwanisa kuona kuti ndedzipi… verenga zvakawanda
Kunamata kuti zvinhu zvese zvifambe zvakanaka kubasa kana mudare chiitiko chechokwadi chekutenda. Nguva zhinji zvinotendwa kuti chiito chekupererwa kana kuti chinoratidza utera kana kusakwanisa kuita zvinhu pachedu, asi ichi hachisi chokwadi zvachose. Kuda kutaura ... verenga zvakawanda
Munamato kuna Razaro Musande anozivikanwa kubvira kare semubatsiri mukuru wevarombo, vanorwara nemhuka. Munamato kuna Razaro Musande chombo chine simba chatakapihwa uye kuti kuburikidza nekutenda chinomutsa zvishamiso zvine simba kwatiri zvinoenderana nezvatinoda. Pamwe ne… verenga zvakawanda
Munamato kuMhandara del Carmen, hapana mamiriro akaoma asingagoni kugadziriswa nemunamato uye mune iyi munamato kuMhandara del Carmen ndiyo nzira yekunamata yatinowanzo fanirwa kutarisana nayo zuva nezuva, nekuti hatizive chii. nguva yatichazofanira kurarama chimwe chinhu ... verenga zvakawanda
3 minamato ine simba yekudzosera basa. Basa nguva dzose chisakiso chokuitira hanya, kunyange nokuda kwaavo vakarasikirwa nebasa ravaida chaizvoizvo. Mubvunzo "asi ndakatadzei?" Hazvipindi mupfungwa dzedu uye isu tinobvunza kugona kwedu. Asi chokwadi ndechekuti kazhinji chikonzero chekudzingwa hachisi ... verenga zvakawanda
Munamato wekupingudza murume, kugara uchichengeta kuwirirana mumba ibasa rakaoma uye dzimwe nguva rinoda betsero youmwari. Munamato wekupingudza murume unounza kushivirira, kugadzikana uye kudzikama kurudo rwako. Munhu mumwe nomumwe anoita zvakasiyana kumamiriro ezvinhu akaoma ehupenyu. Kana murume wako ari kurwara... verenga zvakawanda
Munamato kuna San Judas Tadeo yenyaya dzakaoma uye dzinosuwa pakati pezvikumbiro izvo munhu angave nazvo, pane nyaya dzakaoma kupfuura dzimwe. Kune ava pane munamato une simba uyu. Pano haugone kukumbira zvinhu zviri nyore kana zvisina maturo, kureva kuti munamato uyu wakakosha kukumbira zvinhu zviri... verenga zvakawanda
Munamato kuMhandara yeGuadalupe wakasimudzwa nekutenda uye kubva pamwoyo muchiito chekuzvininipisa chinoratidza kunzwa kwemoyo wemunhu kukumbira rubatsiro kune vanhu vemweya. Hazvina mhosva zvatiri kutarisana nazvo izvozvi, minamato inoitirwa kuti... verenga zvakawanda
Munamato wekupedza kufunganya. Kuzvidya mwoyo ndiko kunzwa kunoshandura zvinhu zvakanaka muhupenyu kuva zvikonzero zvekuwedzera kunetseka uye kutambura. Kana iwe uri munhu wekutenda kana kuti uchida kuva mumwe, isa munamato wekurapa kusagadzikana muhupenyu hwako hwemazuva ese. Unogona kunge uri iwo mushonga wakanakisa kubata nawo... verenga zvakawanda
Kunamatira Vana. Ndivo chikonzero chemufaro wakasimba uye kusuwa izvo chero munhu anogona kunzwa. Ichi ndicho chikonzero kusimudza munamato wevana kuRopa raKristu uye neMweya Mutsvene chinhu chakajairika. Kubva panguva yatinoziva kuti variko, moyo yedu inozadzwa nekunetseka uye… verenga zvakawanda
Serenity Munamato wakanangidzirwa kuna Reinhold Niebuhr aive muzivi weAmerica, nyanzvi yezvechitendero, uye munyori. Mutsara uyu wakave wakakurumbira chete mitsara yawo yekutanga, wakatangira muHondo Yenyika Yechipiri kunyangwe nyaya dzinotenderera mutsara uyu dzakati siyana, chokwadi ndechekuti, se ... verenga zvakawanda
Munamato wekuropafadza chikafu itsika ichiri kushanda nanhasi mumhuri dzese. Icho chikamu chedzidzo yevana uye chinhu chinoitwa kunyangwe muzvikoro sekudzidzisa. Kukosha kwekuita munamato uyu kuri mukutenda, mukukoshesa… verenga zvakawanda
Munamato wembwa inorwara. Kuti imbwa ishamwari dzepamwoyo dzevanhu, pasina kupokana. Vanounza mufaro nekuseka kumhuri. Asi zvinosuruvarisa, hazvisi zvose maruva. Sevanhu vapenyu, vanorwarawo, vanoda kutarisirwa uye kukonzera kunetseka. Munamato weimbwa inorwara uchadzikamisa iwe nemhuri yako mune izvi… verenga zvakawanda
Kuporesa munamato kuti udzore hutano hwako nekukurumidza, uyu akauya kuzozadzisa mushonga wevarume. Kunyengetera, kuda kwako kunotowedzera kusimba kuna Mwari, uyo achawana nzira yakanakisisa yokukuporesa. Mushonga uyu unogona kuuya nekukuendesa kuna chiremba ari nani, semuenzaniso. Mune zvimwe zviitiko, zvinogona kubuda kubva pakuwanikwa kweimwe nyowani… verenga zvakawanda
Munamato wekuti ex wangu adzoke anogona kuve ruponeso rwedu chete panguva idzo hukama hwerudo. Tinogona kuita kuti munhu iyeye adzoke kwatiri munguva shoma pane yaitarisirwa uye zvese nekungotaura munamato unoita sewakapusa kune vazhinji asi une simba munzira huru. Nemunamato uyu tinogona kuwana... verenga zvakawanda
Mazita ekutanga eWhatsApp mapoka. Paunofunga gadzira whatsapp group, chii chinoita kuwedzera kunyepedzera kusarudza zita repakutanga reboka iri. Wese munhu ari mukati meakati WhatsApp mapoka, uye kana wauya pano, pamwe nekuti uri kutsvaga a Izita rekutanga rako rinotevera WhatsApp group. Neichi chikonzero, pazasi iwe une runyorwa na iwo mazita epakutanga chaiwo emaWhatsapp mapoka.
Peji1 Peji2 ... Peji99 Zvadaro →
Wells Fargo: Zvinokosha zvinodikanwa kuti uvhure account
Kugara muSpain: Zvinodiwa, Mutengo uye zvimwe zvakawanda
Kugara muCosta Rica: Zvinodiwa, Zvakanakira uye Zvakaipa
Kugara muAlaska: Zvinodiwa, sarudzo dzekushanda uye nezvimwe
Panama Visa: Zvikuru Zvinodiwa Kuti Uiwane
IZVO dzidza Rubatsiro KUDUDZIRA uremu Bhaibheri HWANO Buenos Aires Chile Tropical Cyclone corazon Curiosities Sei Ekwadho zvirwere zvemhino zvirwere zvepfungwa Zvirwere zvemaziso zvirwere zvenzeve Mhuri Pharmacology Chinangwa Mitsara Nyika Overview Nyaya neNgano Mathematics Maternity Kufungisisa Kuvandudza hutano Zviroto zvangu Ngano dzechiGiriki europe mountain Minamato Popular Mapapu Zvitendero Ropa Kugaya chirongwa Wana uremu Zviroto dzokufembera vachishandisa Tilas Mhando dzewanano Maitiro Venezuela Mhepo Whatsapp
© 2022 Discover.Online Kodzero dzese dzakachengetwa.
Yakagadzirwa Stop Gamers sei unblock iphone teregiramu chiteshi
sei kudzosa mimhanzi pa instagram
maitiro ekuita nfc pane iphone
Maitiro ekuita moyo neefoni mbozha keyboard
sei kubvisa watermark kubva tik tok
sei unblock iphone teregiramu chiteshi
maitiro ekuvandudza youtube
maitiro ekudhanilodha minecraft mahara pa iphone
maitiro ekuziva kana mumwe munhu achiregeredza mameseji mutumwa
nzira yekuwana sei ip kero yemunhu
sei kusevha instagram nyaya nemumhanzi
kuchinja sei supercell id email
sei kudzima yakavharidzirwa nhare pawhatsapp
maitiro ekuona yakavanzika profile mufananidzo wewhatsapp
- sei kuona vanhu vekupedzisira vakatevera pa instagram
kuona sei akaona vhidhiyo pafacebook
maitiro ekutsvaga mapoka mumateregiramu
sei kudzima facebook account isina password uye email
maitiro ekuwana emahara mari muhope yeligi nhabvu
kuziva sei kuti ndinotamba kwenguva yakareba sei lol
kudzoreredza yakavharwa mameseji pawhatsapp
kuziva sei kana yakavharirwa nhamba yakadaidza iwe
kunyora mabhii pafoni keyboard
maitiro ekuona disney plus pa tv
sei kupora instagram account
maitiro ekuteedzera macontact kubva kune iphone kuenda kune sim
maitiro ekuziva iyo facebook password usingaichinje
maitiro ekuchinjisa mafaira kubva kumac kuenda kunze dhiraivhu
nzira yekuwana munhu pafacebook kuburikidza nemifananidzo
- kutumira sms kunhamba yandivharira
maitiro ekushandisa lenovo backlit keyboard
kuziva sei ane nhamba yangu mubhuku renhare
maitiro ekuisa iyo timer pane instagram
sei kuziva kuti ndiani akanzura meseji pane instagram
kujekesa sei vhidhiyo
kuziva sei kana sms yakavharwa
maitiro ekuisa google icon pane desktop
maitiro ekudzosera kukonana royale maakaundi
maitiro ekudzosera yakabviswa teregiramu account
maitiro ekuverenga instagram meseji usingavaone
maitiro ekudzima vo lte
maitiro ekuona kuti mangani mameseji aripo mune chat
maitiro ekutamba maviri aine nintendo switch
- maitiro ekuvhura mu teregiramu
sei kudzima zvinhu zvakachengetwa pa instagram
kuziva sei uyo anoona nyaya asingazivikanwe pafacebook
sei kuona vanhu vekupedzisira vakatevera pa instagram
maitiro ekuziva ndiani ari kuseri kweiyo instagram profile
kuteerera sei kufona zvakare
maitiro ekubatanidza kune wifi usingazive password
maitiro ekuvhura foni yakavharirwa neanoshanda
maitiro ekuisa whatsapp pane smartwatch
sei kubvisa mhuri yekubatanidza
kuburitsa sei cd
maitiro ekuona iwo maawa emutambo pa ps4
kuziva sei kana munhu ari online pawhatsapp
Maitiro ekuita Facebook posvo kugoverana
- kuziva sei kana vanhu vaviri vari kutaura pafacebook
maitiro ekudzosera snapchat mafoto
maitiro ekuona live pa instagram pasina kuonekwa
zuva rekupedzisira pasi pano rakasununguka kutenga
sei kutamba online 2vs2 fifa
maitiro ekuziva kana sms yakaverengerwa ne android
sei kudzima pikicha kubva kune yakawanda posvo pane instagram
kuisa sei nhamba mu Calculator
maitiro ekuwedzera huwandu hwebluetooth headphones
maitiro ekubatanidza mbeva uye keyboard ku ps4
maitiro ekuona shamwari dzichangowedzerwa shamwari
kuchinja sei maakaunzi mu fortnite
sei kutamba fifa kweviri pa ps4
Ndingaite sei kuti ndifonere nhamba yandivharira
kujoina whatsapp group pasina mvumo
a sei kuita